KAGA SHUBO EVCPLSU
Garaac *721# si aad ugu shubato
xirmooyinka cusub ee MifiPlus
Buy Mifi with screen
at $30 only with 13Gb free data
Shirkadda hormuud waxay kuu keentay adeeg internet aad u xawaara sareya, qiimahiisuna ku raaligeliya. Adeegyadaas waxay isugu…
Xirmada ANFAC (5$)
Shirkadda Hormuud Telecom waxay u keentay macaamiisheeda sharafta leh adeegga Anfac oo u suurta gelinaya macaamiisha in $5-ti…
Qiima dhimis Dibadda
Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud waxay ogeysiineysa macaamiisheeda in qiima dhimis balaaran ay ku sameesay wicitaanka dibada.
Qiima Dhimista Gudaha
Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud waxay u keentay macaamiisheeda Qiimadhimis loogu talagalay wicitaana gudaha kaliya oo ka bilaa…
Hormuud Mifi Internet
Adeegga Internet-ka (Hormuud Mifi) waa adeeg Internet 4G oo aad jeebka ku qaadan karto. Waxaad ku isticmaali kartaa gurigaaga, gaarigaaga, iyo goobta ganacsiga. Adeegga Hormuud Mifi waxaad ku xiran kartaa taleefankaaga, tablet-ka, Computer-ka ama labtop-ka.
6 hours batter life
11GB free data at first time buy
Mareegta shirkadda Hormuud waxaa lagu soo kordhiyay oo aad ka heli kartaa hab cusub oo aad wax kaga iibsan karto qaar ka mid ah adeegyada kala duwan ee shirkadda adigoo isticmaalaya talifoonkaaga, islamarkaana ka tagin gurigaaga ama goobtaada shaqo. Waxaa sidoo kale laguu fududeynayaa in iibkaaga laguugu keeno halkaad oogto.
Adeeg internet ku raali geliya, Qiima Macquul ah tayadiisuna aad u sarreysa.
Adeegga My SMS waxa uu macaamiisha u suuragalinayaa in ay fariin qoraal wadareed u diri karaan koox ay ka dhaxeyso xiriir shaqo, wax kala iibsi, adeeg bulsho iyo wixii lamid ah.
We decided to go with Hormuud Telecom Somalia because of the confidentiality and security we need to provide for our clients
TopGradeEnglish, buyer of our products
As a long-time client of Hormuud Telecom, I can state without hesitation that their staff and management have always provided a very high level of service and dedication.
design-first,, buyer of our products
Book VIP Hormuud Number now and start your journey today!